Iimidlalo ezi-5 ezilungileyo ze-Harley Race - Wwe
Iimidlalo ezi-5 ezilungileyo ze-Harley Race
Ngomhla woku-1 ka-Agasti ka-2019, ilizwe lomlo elimanyene ukulila ngokudlula kwentsomi, uHarley Race. Ngexesha lakhe lokuqala, wayeqwalaselwa ngabaninzi, bobabini abagxeki kunye nabanye abalwa naye, ukuba abe yenye yezona ngqondo zinkulu zokulwa kwisizukulwana sakhe. Ukuthathela ingqalelo into yokuba uHarley Race walwa ngexesha elinye noDory Funk Jr, Bruno Sammartino, Dustin Rhodes kunye noDon Muraco, le yindumiso ephezulu kakhulu.
Uninzi lwabalandeli be-wrestling abaqhelekileyo bayamazi ngenxa yeNkosi yakhe yeRing gimmick, kodwa ngokuchasene nenkolelo edumileyo, umdyarho waba ngowesibini ukulwa umdlalo, hayi owokuqala (uKumkani wokuqala weRingi, uDon Muraco, uya kubonakala olu luhlu).
Nangona kunjalo, wasebenzisa uloyiso lwakhe kwitumente ukuziqhubela kwimpumelelo enkulu kwiWWE (ngelo xesha yaziwa ngokuba yiWWF). Nangona kunjalo, uHarley Race wayengaphezulu kokuhlekisa nje. Wayengumchwephe weringi owayenokubonakala elungile ekuphumeleleni nakokoyiswa. Ngokwelinye iqela lakhe leqela lethegi uVader U-Harley Race wayenobuchule bokubalisa ibali eringini esebenzisa umzimba wakhe.
Kule nqaku, siza kujonga umsebenzi we-Harley Race kwaye sixoxe ngemidlalo yakhe emihlanu ebalaseleyo.
# 5 Uhlanga lwe-Harley nxamnye noDon Muraco -1974
Ngaphambi kokuba uHarley Race kunye noDon Muraco babe ngamagama asekhaya kwi-WWF, babambana ngenkuthazo ye-wrestling eseFlorida eyaziwa ngokuba yi-Wrestling Championship evela eFlorida. UDon Muraco wajoyina inkampani ngo-1974, kwaye omnye umdlalo wakhe wokuqala wawuchasene no-Harley Race.
Ngelo xesha, u-Harley Race wayeyintshatsheli ye-NWA yeHlabathi yangaphambili kwaye uninzi lwabantu lwalulindele ukuba uza kuphumelela ngokuchasene ne-rookie Don Muraco njengoko wayephumelele kwimidlalo yakhe yangaphambili. Into abantu ababengayilindelanga yindlela elungileyo uHarley Race anokumenza ngayo uMuraco ajonge ngexesha lomdlalo. Ngamanye amanqaku ngexesha lomdlalo, abalandeli babekholelwa ukuba uMuraco uza kuphumelela ekoyiseni intshatsheli yangaphambili.
ukunceda njani umntu onemicimbi yokulahla
Ngokwentatheli yomlobi oligqala, UDave Meltzer , lo mdlalo uhambe indlela ende ekumiseni uDon Muraco njengomntu okhuphisana naye onokuthenjwa emehlweni abalandeli. La madoda mabini aya kuqhubeka nokuba nemidlalo engummangaliso ngokuchaseneyo kodwa uninzi lwabantu, lo ngumdlalo oqaqambileyo.
njani ukungabi ngumfazi osweleyo kubudlelwane
ufuna ukwenza xa ukruqukile
Umyeni wam wandishiya waya komnye umfazi kwaye ndifuna abuye
Kutheni ndinemicimbi yokuthemba
ukwazi njani ukuba umhle
isihogo kwiseli ka-2016 umhla